I-Semalt Expert ibonisa i-SEO Strategies esebenza ngokugqibeleleyo
Ukuthengisa ngokuphumelelayo kwe-SEO akuxhomeki kwigama elingundoqo. Ukuqonda okunyanisekileyo kwabaphulaphuli abajoliswe kuyo njengamaphethini abo e-inthanethi, imibuzo kunye neenjongo nazo zibalulekile. Ukugcina i-SEO enempilo kwimarike yangoku ngokuxhomekeke ekubeni umthengi unelisa njani injongo yomsebenzisi. Unokuba nomxholo womgangatho kwisayithi, kodwa ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zinamava amaninzi omsebenzisi ziyahambisana nokuhambisa izisombululo kwiimfuno zabo.
U-Ivan Konovalov, uMphathi weNtengo kaMthengi we-10 (Semalt , uchaza apha izicwangciso ezifanelekileyo zokukhupha umkhankaso wakho wokuthengisa.
I-Google yenza utshintsho olwenziwa ngamabango kwi-algorithms yayo engaphezu kwekhulu ngonyaka. Yenza ukuthengiswa kwe-SEO kunzima kakhulu njengoko kungekho ndlela eqinisekileyo yokuphucula i-site ngokukhawuleza ukuba inike isikhundla esiphakeme kwiziphumo zophando - infographic online creator.
Indlela efanelekileyo yokumelana nale miphumo kukugxila kwizinto ezingatshintshi ngokupheleleyo: abantu. Emva kokuba uqaphela iimfuno zabaphulaphuli, kunye neenjongo zabo zophando, kuba lula ukwenza umxholo ojikeleze kuwo. Kungcono kunokuba uthembele kumagama aphambili anokunika kuphela isikhundla esilungileyo kwixesha elifutshane.
Ukudibanisa injongo yomsebenzisi ukuthengiswa kokuqukethwe kubalulekile kubathengisi njengoko banokuqhuba uphando lweemarike ngokukhululeka. Xa basebenzisa iinjinjini ngokwabo, bayazi malunga nomzabalazo wenkqubo yokukhangela ngaphambi kokuba bafumane impendulo yombuzo, iinketho ezenza izixhobo zophando zifumane iziphumo ezahlukahlukeneyo, kwaye imifanekiso yokukhangela iza kubuyisa iziphumo ezifanelekileyo .
Uhlalutyo oluqhutyelwe kwinjongo yomsebenzisi ngelixa lisebenza nge-injini yokukhangela lunempembelelo ebonakalayo kwindlela abahwebi bavelisa ngayo amava amaninzi omsebenzisi..Amava omsebenzisi afanelekileyo afana nokuphumeza umkhankaso we-SEO kuba ufuna ukuba neengqondo zenceba ngabaphulaphuli abafunwayo. Kulula ukulungelelanisa iimfuno ezixhomekeke kwizinto wena, njengomthengisi, onokucinga ukuba yindlela efanelekileyo. Nangona kunjalo, kubaphulaphuli ababanzi, kubandakanyeka ngakumbi.
Ukuyila i-UX idinga uphando oluninzi olufanele lusebenze njengesikhokelo sokudala umxholo womgangatho kubasebenzisi abajoliswe kuyo. Ukufunda ngeemfuno zesiseko somsebenzisi kufuneka kuncedise ulwazi malunga nomxholo ozakubeka kwisayithi ukulungiselela ezo zidingo. Xa uphando olunzulu luya phambili, bhetele unokwenza ukulungelelanisa isayithi ukubonelela ngeenkonzo ezifanelekileyo kunye namava afanelekileyo.
Ngubani owenza okulungileyo?
I-SEO: Iziza ezinika abasebenzisi iziphumo ezichanekileyo kwiindlela ezikhawulezileyo neendlela ezifanelekileyo ziphakathi kwalabo abanelisekisa injongo yabo. Injongo ephambili ye-Google kukubonelela ngethuba elihle kakhulu lomsebenzisi okokuba kutheni amasayithi anezona zixhobo ezisemgangathweni kwi-intanethi ezine-SEO enamandla. Awuyikuphinda ayifake okanye ayenzileyo, ungasebenzisi izicwangciso ze-SEO, zisebenzise kakuhle, zikwazi ukuhamba ngokukhawuleza, kwaye zihamba ngeendlela ezilula.
i-Wikipedia. Iyahambelana nesikhokelo sekhwalithi ye-Google yikho nto ibonakala phakathi kweziphumo zokuqala kwi-SERP. Kusebenza kakuhle ukuba i-Google isebenzise ulwazi lwayo kwigrafu yolwazi. Inika ulwazi olunzulu olufakela amaninzi amagama athile, iimpendulo zemibuzo, ayikho iqela. Kuyinto engenazibonelelo ezingenazibonelelo kwaye yenza izixhumanisi ezincedo ezifumanekayo ukuze zicaciswe ngakumbi.
IMDb.com. Kuphakathi kweziphumo zophando eziphezulu xa kuziwa kwiinkcukacha ngee-movie okanye kwi-tv. Inika:
Ukuboniswa: isebenzisa ama-hierarchies ukunika ulwazi oluhlelekile nolunqwenelekayo.
Ukufikeleleka: ngu onobuhlobo obuselula kubasebenzisi abatsha nabakubuyayo.
Ukusetyenziswa: inesibonakaliso esisebenzisanayo kunye neendlela ezicacileyo zokusetyenziswa.
Ixabiso: libonakalisa ulwazi lwalo ngcaciso emfutshane, amava okubonisa imifanekiso kunye nomxholo ocacileyo, ophezulu.